बलिउड फिल्म रिलिजप्रति बोर्ड किन मौन ? – Mero Film
बलिउड फिल्म रिलिजप्रति बोर्ड किन मौन ?
२०७५ भदौ ३ गते ११:३९
श्रीधर पौडेल : बुधबारदेखि नै रिलिज भएका २ हिन्दी फिल्मले नेपाली फिल्मको व्यापारमा असर गरे । यी दुइ फिल्मले गर्दा नेपाली ४ वटा फिल्मले मप्लिटप्लेक्समा सौताको छोराको जस्तो व्यवहार भोग्नुपर्यो । मल्टिप्लेक्स संचालकका लागि नेपाली फिल्म नभएको बेलामा हल भर्ने माध्यम मात्र हुन् । हिन्दी र अंग्रेजी नहुँदा नेपालीले धेरै शो पाउँछन्, नत्र उही हो हालत ।
नेपाली फिल्म शुक्रबारदेखि मात्र रिलिज गर्ने सहमती गरेको चलचित्र निर्माता संघले हिन्दी फिल्मको बारेमा कुनै संझौता गरेन । जसले गर्दा, हिन्दी फिल्म वुधबार नै रिलिज हुँदा नेपालमा पनि सोही मितिमा रिलिज भए । अघिल्लो शुक्रबारदेखि चलेका नेपाली फिल्मले आफ्नै देशमा हेपाहा प्रवृत्ती भोगे ।
हिन्दी फिल्म रिलिजको बिषयमा बोल्ने माध्यम भनेको चलचित्र विकास बोर्ड मात्र हो । किनकी, हलवालाहरुले आफूले जे चलाउँदा फाइदा हुन्छ त्यही नै चलाउने हुन् । उनीहरुलाई आफ्नै देशको फिल्मप्रति कुनै संवदेना नै छैन । यसैले करोडौ बजेटमा बनेका नेपाली फिल्मप्रति बोर्ड उदासिन बन्न मिल्दैन ।
बोर्डले कमाउने माध्यम नै हिन्दी फिल्म
चलचित्र विकास बोर्डमा जुन अध्यक्ष आएतापनि हिन्दी फिल्म रिलिजको बिषयमा कुनै शब्द बोल्न सक्दैनन् । यसको मुख्यकारण, हिन्दी फिल्म नै बोर्डको आम्दानीको मुख्य श्रोत हो । यसैले पनि आफूले कमाउने मुहान नै सुकाउन बोर्डका हाकिमहरु किन तयार हुन्थे र ?
अहिले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा निकिता पौडेल छिन् । निकिता नै पूर्व अध्यक्ष रहेको गोपिकृष्ण मुभिजले वुधबार रिलिज भएका २ फिल्म नेपालमा किनेको हो । यही भएर पनि निकिता आफ्नै परिवारको विरुद्धमा जाने कुरै भएन । बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि निकिताले गर्ने काम फेरि उही नै हो । यसैले उनले हिन्दी फिल्म रिलिज हुँदा नेपाली फिल्मलाई दिनुपर्ने शोको बिषयमा कडाई गर्लिन् भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । यसै त निकिता बक्स अफिस लगाएको हुँ भन्दै खुशी छन् । उनलाई अहिले अरु बिषयमा सोच्ने फुर्सद छैन होला ।
ठूलो कलाकार र ब्यानरका हिन्दी फिल्म रिलिज हुँदा नेपाली सिनेमाका निर्माता दुलोमा लुक्नु स्वभाविक नै हो । चलाइहालेको खण्डमा पनि मल्टिप्लेक्समा शो नपाइने, सिंगलमा सानो हल पाइने समस्या छ । यस्तो समस्याले नेपाली फिल्मका निर्माता आक्रान्त छन् ।
नेपालमा बक्स अफिस लागू भएको छ । तर, बक्स अफिस लागू भयो भनेर मात्र खुशी हुने अवस्था पनि छैन । हिन्दी फिल्मलाई नेपालमा वितरणको जिम्मा लिने ठूला हल चलाउनेहरु नै हुन् । उनीहरुले आफ्नो लगानी उठाउन नेपाली फिल्मलाई हेप्दै आएका छन् ।
नेपाली फिल्म भन्दा पनि हिन्दी फिल्मले दिनमा यति शो मात्र पाउने भनेर किटान नभएसम्म यो पेलाई जारी रहन्छ । चलचित्र विकास बोर्डले यो कुरामा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।